Hiran State - News: xurkuf cusub oo laga dareemayo hogaanka sare ee TFGda iyo Cwali Gaas iyo dhawr wasiir oo lag ayaabo in ay shaqadooda waayaan dhawaantan.
xurkuf cusub oo laga dareemayo hogaanka sare ee TFGda iyo Cwali Gaas iyo dhawr wasiir oo lag ayaabo in ay shaqadooda waayaan dhawaantan.
HS:-Xurkuf cusub oo laga dareemayo hogaanka sare ee TFGda iyo C/wali Gaas iyo dhawr wasiir oo lag ayaabo in ay shaqadooda waayaan dhawaantan.
Kedib markii ay TFGda dhexdeeda ka bilaabatay isxulufeysi labada Shariifna dareemeen in ay meel cidla ah taagan yahiin aya hada waxaa Viilada ka socda dhaq dhaqaaq iyo siyaasado iska soo horjeeda. warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in siyaasadahan cusub laga yaabo iney kalaaftaan C/wali Gaas iyo dhar ka mid ah golahiisa wasiirada.
Arintaan oo siweyn looga dareemayo gudaha Villada iyo inta ka ag dhawa siyaasada Mogdisho ee labada Shariif ayaa la hadal hayaa in ilaa 5 wasiir ay meesha ka baxaan si dhawrka bilood ee ka harsan TFGda waji cusub u yimaadaan.
Wasiiradan oo intooda badan u badan qurbo joog ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arimaha gudaha, wasiirka Qorsheynta, dibada, Gaashaandhiga iyo wasiir laga yaabo inuu muran badan dhaliyo waa wasiirka maaliyada oo ay oori wadaag yahiin C/wali Gaas kaasi oo laga yaabo in shaqsi kale lagu bedelo laakise wasiiradan kale waxey u badan tahay iney waayaan boosaskooda.
C/wali Gaas oo maalmahan dibada ay ka wadeen isaga iyo Farmaajo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashada soo socota iyagoo mid mid uga soo jidanayo shaqsiyaadkii siyaasad ahaan ka ag dhawaa labada Shariif.
Duufaantan cusub ee siyaasadeed ayaa laga yaabaa iney salfato C/wali Gaas si ay taasi u dhacdana waxaa marka hore la leeyahay isku shaandhee gobolaha wasiirada kedibna arinta waxey u gudbi doontaa baarlamaan iyo SHariif Hasan.
Inta badan golaha wasiirada wey ogyahiin inuusan waqti badan u harin waxii hada ka danbeeyana la gali doono doorasho marka iyagu qaarkood kalama jecla in xilka laga qaado iyo in kale waxey hada isku mashquulinayaan kooxdii ay xulufo la sameyn lahaayeen. sidoo kale waxaa lag ayaabaa in isku shaandheyn lagu sameeyo maamulka gobolka Banaadir.
· admin on October 12 2011 10:52:50 · 0 Comments · 1696 Reads ·
14,605,776 unique visits